လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ပညာရှင် Nicole Prause ၏တရား ၀ င်အနိုင်ယူခြင်း Gary Wilson သည် Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
လိင်မှုဗေဒပညာရှင်နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်အားသူ့ကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများအားတရားဝင်အောင်နိုင်ခြင်း Gary Wilson သည်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
ဂယ်ရီ WilsonPorn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်) သူ့ကိုနှုတ်ပိတ်ရန် Sexologist Nicole Prause ၏ကြိုးပမ်းမှုဥပဒေအရအနိုင်ရရှိခဲ့သည်
အသံ porn သုတေသီရဲ့တားမြစ်မိန့်ကိုလိုက်အောင်အဖြစ်ငြင်းပယ်; ရှေ့နေစရိတ်များကို SLAPP ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပေးရပါမည် (သာ။ ကြီးမြတ်အခြေအနေတွင်ပေးဆောင်းပါး).
Ashland, Oregon: ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁၆ ရက် - အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးထောက်ခံသူဂယ်ရီဝဲလ်ဆင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသီများအားတရားဝင်အောင်နိုင်ခြင်းနှင့် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထောက်ခံအားပေးသူနီကိုးလ် Prause။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Wilson အားတားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းမှုသည်အများပြည်သူပူးပေါင်းပါ ၀ င်မှုကိုဆန့်ကျင်။ တရားမ ၀ င်သော“ မဟာဗျူဟာတရားစွဲဆိုမှု” (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ဟုစီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည် Wilson အားတိတ်ဆိတ်စွာအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အားသူ၏အခွင့်အရေးအားလျှော့ချရန်အတွက်တားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အား Wilson ၏ရှေ့နေစရိတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
Wilson သည်အရောင်းရဆုံးစာအုပ်ကိုရေးသားသူဖြစ်သည် Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ, လူကြိုက်များသော TEDx ဟောပြောချက်ကိုတင်ပြသူ“မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု,” (ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၁၃ သန်းကျော်) နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အိမ်ရှင် www.YourBrainOnPorn.comညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်သုတေသန၊ မီဒီယာနှင့်ကိုယ်တိုင်တင်ပြချက်များအတွက်ရှင်းလင်းရေးစင်တာ။ Wilson သည် Prause ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူထုထုတ်ပြန်ချက်များကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကဝေဖန်ခဲ့သည်။
"ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းသည်ပထမပြင်ဆင်ချက်ကာကွယ်ရေးတွင်ကိုယ်လက်အင်္ဂါချွတ်ယွင်းနေသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်ကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းမှုကိုထောက်ခံအားပေးသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသူများနှင့်အများပြည်သူအပေါ်ဆိုးဆိုးရွားရွားမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ဝေဖန်မှုများကိုကန့်သတ်ရန်နှင့်နှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ်"Wilson ကတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အပြီးကဆိုသည်။ “ဤသည်မှာ porn ၏အန္တရာယ်များကိုလူသိရှင်ကြားပြောဆိုရန်ဝိုင်း ၀ န်းထောက်ခံအားပေးသူများ၏ခံနိုင်ရည်ရှိသောအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုကိုကျော်လွှားရန်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။။ "
ဥပဒေကြောင်းအရအောင်နိုင်မှုသည်ဗြိတိန်အခြေစိုက် SCRAM Media အား PFuse သည် NoFap အိမ်ရှင်အဲလက်စ်ရော့စ်၏လူနည်းစုရန်ပုံငွေလှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်“ သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများ” ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲကာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးအတွက်တိုင်တန်းခဲ့သည်။ အရ ယူကေသတင်းထုတ်ပြန်ချက်, SCRAM ဇာတ်လမ်းက NoFap နှင့် Rhodes သည် (Semite Anti-Semites အပါအ ၀ င်) လက်ယာအစွန်းရောက်အစွန်းရောက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ Prause နှောင့်ယှက်ဖို့လှုံ့ဆော်အစွန်းရောက်; Prause နောက်ယောင်ခံခံရဖို့ ဦး ဆောင်တဲ့ crowdfund ကောက်ယူ; နှင့် Prause ၏ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနကိုရပ်တန့်စေရန်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးတွင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ ထိုတောင်းဆိုမှုများကိုသက်သေပြရန်အထောက်အထားများနှင့်တင်ပြသည့်အခါ SCRAM သည်ဆောင်းပါးကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီး Rhodes တွင်ကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ဥပဒေရေးရာကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးခဲ့သည်။ လူသိရှင်ကြားတောင်းပန်ခဲ့သည်မတိုင်မီ လုံးဝပိတ်ပစ်။
Prause သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေါ်ပေါက်စေသောလူများနှင့် ပတ်သက်၍ သိလျက်နှင့်မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်ဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုဖြင့်တရားစွဲခံရသည်။ Donald အယ်လ်ဟီလ်တန်, Jr. et al ။ နီကိုးလ် Prause။ , San Texas ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းရှိ Texas ခရိုင်တရားရုံး၊ အမှုအမှတ် ၅ - ၁၉-CV-5-OLG; နှင့် အလက်ဇန်းဒါး Rhodes v ။ နီကိုးလ် Prause, et al။ , Pennsylvania ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခရိုင်တရားရုံး၊ အမှုအမှတ် ၂ - ၁၉-cv-2 ထိုအမှုများတွင်တရားလိုများက Prause အားတရားမ ၀ င်၊ အသရေဖျက်မှုနှင့်လှောင်ပြောင်မှု၊ လိင်စော်ကားမှု၊ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် Prause ကသူတို့ကိုပါပစ်မှတ်ထားသည်ဟုကျိန်ဆိုသောကြေညာချက်များဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်။ ကျမ်းကျိန်လွှာ # 1, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 2, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 3, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 4, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 5, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 6, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 7, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 8, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 9, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 10, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 11, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 12, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 13, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 14, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 15, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 16.
မီဒီယာစုံစမ်းမှုများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်မှသင်၏ ဦး နှောက်မှ 'Press' ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကို EMAIL: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
IMAGE: ဂယ်ရီခ Wilson ၏မင်္ဂလာပါ https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQLdBLzFL18Yif01ZdH5zooofXsMv-VQd7Fs6-3eth_IAs6Jl_mGrWpxiOnigbHIHbz30uClhcZ_iMn/pub
တရားရုံးအမိန့်ကို download လုပ်ပါ